Taariikhda My Butros » 7 Khaladaadka Fool Haweenka Samee Fursadda kasta oo xiriir burbur Taasi
Last updated: Jan. 14 2021 | 2 min akhri
mid ka mid No waa qumman yahay. Dhab ahaantii, shukaansi ma noqon doono mid xiiso u fiicneyn sida badan haddii qof walba ahaayeen. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo in burburisay kartaa waayo-aragnimo shukaansi ah. The talooyinka hoos ku qoran yihiin qaladaad fool xun in dumarka aan sameeyo marka shukaansi.
In aad u Available
Curinta badan oo xiriir ah oo dhakhso leh jawaabaya wixii waraaqo isaga ka yihiin calaamooyinka oo dhan in idinku aad ka heli kartaa. Ragga eegto loogu tala galay dumarka kalsooni iyo madax bannaan oo la raadinayo kuwa kale. Inta aad waxaa laga yaabaa in ka welwelina ama aad rabto in ay muujiyaan xiisaha aad nin, isagoo sidoo kale la heli karo waxaa iman doona daafaha quus.
Nin kasta oo doonaya inuu naag xaq u madax banaan?! Si kastaba ha ahaatee, haddii aad tahay “in-in” naftaada, nin u beddelmi doonaa. Waxaa muhiim ah in waqti hadalka ku saabsan taariikhda iyo waayo-aragnimada iyo danaha iyo sidoo kale idinkaa la wadaago.
Joogto In On Your Phone
Waxaad tahay oo ku saabsan taariikhda si aad u hesho in la ogaado kara aad Mr. Xuquuqda iyo qeybsanaan ku xigeenka. Joogto isagoo on your phone waa fiicnayn sida nin uusan rabin in uu taariikhda aad telefoon, uu doonayo si aad u hesho si aad u ogaato. Hubi in aad telefoonka ma aha oo kaliya in bac si aad u taariikhda oo dhan, laakiin sidoo kale waxaad hubisaa in si ku aamusan.
Times ayaa la beddelo iyo qurbaan inuu bixiyo maalinta ugu horeysa ayaa noqonaya shuruud. Iyadoo sacab muggiis oo rag ku adkaysanayaan doonaa on bixinta, badan oo qalbi jabi doono doonaa haddii aadan bixin in ugu yaraan kala jabeen biilka.
Cabidda aad u badan
Inkasta oo isagoo ah cabniinka ama laba taariikhda a waa u wanaagsan, cabo ka badan ama xataa sakhraama on taariikhda uu ku yeelan doono isaga u tartamaya naftiisa. Ma aha oo kaliya ma show in aad diyaar u tahay xiriirka halis ah laakiin marar badan la cabbo raadad aad u badan in laga yaabo inay ku yidhi wax aad ka xumahay laga yaabo ma aha.
Isku dayga in isaga beddel
Sharad noloshaada jacayl ku iman kara nin ee waa wadadii musiibada. Shukaansi qof oo kaliya sababtoo ah waa soo jiidasho ama lacag halka isku dayaya in ay isaga beddelatid noqday aad nin kaamil ah xiriir kasta oo ka jeesan doono mid la cadho iyo xanaaq buuxiyey galay.
Ragga waxaa si buuxda u soo jeestay off by haweenka jeedin taariikhaha ugu horeysay galay you're-ka-mid-Kaalay nala-is-guursaday ee deg dega ah. Waxaa jira dareen wanaagsan ka dibna isagoo taariikhda la yaab leh ugu horeeyay laakiin Mudanayaal jirin, xajisaan “Waan ku jeclahay” fikirrada naftaada u dhowrkii bilood ee ugu horeeya. Helitaanka halis ah iyo kuwa muujiyaan dareenkooda aad ugu dhakhsaha badan ka dhigi doonaa nin baxsad.